ငှက်ကလေး တကောင် ကို ဝိုင်းရိုက် ကြတဲ့ သူတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ငှက်ကလေး တကောင် ကို ဝိုင်းရိုက် ကြတဲ့ သူတွေ
ငှက်ကလေး တကောင် ကို ဝိုင်းရိုက် ကြတဲ့ သူတွေ
Posted by မိုခ်ိဳ on Jun 26, 2012 in Photography, Thakhin: CJ Only | 30 comments
သတၱ၀ါနဲ႕ လက္နက္ နဲ႕ေတာင္ မမွ်ဘူး
တရက် အိမ်နားက ပန်းခြံထဲ လမ်းသွားလျှောက်တုန်း ငှက်ကလေး တကောင်ကို လူတစု ဝိုင်းရိုက် နေတာ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျမလည်း ကိုယ့်ရှေ့မှာ အဲလို နိုင် ့ထက် စီးနင်း လုပ်နေတာ တွေ့ ရင် အားနည်းသူ ဘက်က ကူတတ် တဲ့ သူဆိုတော့ အဲ လူတွေ ပို ပြန် ရိုက် ပစ်လိုက်တယ်။
၁။ အဲလို ဝိုင်းရိုက် ကြတာ။ သတ္တဝါနဲ့ လက်နက် နဲ့တောင် မမျှဘူး
၂။ သူတို့ ကန်မလာ ပြောင်း ကြီးတွေ က သူတို့ ရိုက်တဲ့ ငှက် ကလေး အသိုက် ဝင် ဆောက် လို့ တောင် ရတယ်
၃။ သူတို့ ကိုပြန် ရိုက် ပစ်လိုက် တာပေါ့
၄။ အိပ်တန်း တတ်တာကို အေးအေးဆေးဆေး မနေရပဲ ချောင်းရိုက် ခံ နေရတဲ့ သနားစရာ ငှက်ကလေး၊ ကိုယ် လည်း သူတို့ ဝိုင်းချောင်းနေတဲ့နေရာ ကို မနည်း ပြူးပြဲ ရှာ ပြီး မှ တွေ့ တာ
(တွေ့ ကြရဲ့ လားမသိ၊ ကန် မလာ စုတ်လေးကို ရှိသမျှ ဇွန်း ဆွဲ ပြီး ရိုက် ထားတာ၊ ပုံတင် တာအများစု တင် နေကြ large ကို လုံးဝရွေး လို့မရ ကျန်တဲ့ ၃ ခု ပဲရွေးလို့ ရတယ်)
၅။ ငါးစာကြွေးနေတဲ့ ကန်မလာမန်းတွေ ၊သူတို့ က စေတနာရှိလို့ ကြွေးနေတာ မှုတ်ဘူး၊ အစာချတဲ့ ချိန် အုံလာတဲ့ ငါးတွေကို စောင့် ဖမ်းစားတဲ့ ဗျိုင်း ကို ရိုက် ဖို့ ချောင်း နေတာ…. အကြံ နဲ့…
၆။ ခါတိုင်းဆို ဒီလို ကောင် လည်း အလွတ် မပေးဘူး၊ ဒီနေ့ တော့ ဟို ကောင်လေးကို မဲနေကြလို့ ဒီကောင့် နား ..လူ မရှိဘူး
၇။ ဗျိုင်း က ဒီလို ဖမ်းနေတာ၊ ကျမတို့ ငါး စာကြွေးရင်တော့ ဒီကောင်မလာရဲဘူး၊ သစ်ကိုင်းခြောက်နဲ့ လှန့် ထားလို့ ၊ ဒါ …ကန်မလာမန်းတွေ အကြံနဲ့ ကြွေးနေကြတာ
၈။ သူလည်း ရိုက် ဖို့ ချောင်းနေတာ
ဟွန်း ……ပုံ တင်ရတာ ပုံ ကြီးရွေး လို့မရ ၊လက်မ ဆိုဒ်၊ မီဒီ ယမ်ရယ်၊ဖူူးစကရင် ရယ် ပဲ ရွေး လို့ ရ တယ်။ တင် နေကြ ဆိုဒ် large ကျတော့ ရွေးလို့ မရဘူး၊ဘာကြောင့်လဲ သိရင် ပြော ပေးကြပါ။
အဲဒါကို အန်တီမိုချိုက ပြန်ရိုက်
အဟီ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ မှားနေပြီဘဲ…..
တယ်လီဆြာ တွေ ကတော့ အဲ့လိုပဲဗျို့ ….
၄၀ဝမမ ကြီးတွေ တပ်ပီး …ဝိုင်းလိုက်ဖ် ရိုက်ကြတာ…
လက်ရာမြောက်မမြောက်ကတော့ …ဗျိုင်းသုတ်လို့ ပါသွားတဲ့
ပုဇွန်ဘော့ကျိတ်တောင် နှုန်သီးဖျား ရေသီးနေတာအထိ
ဒီတေးလ် ပေါ်အောင် သမ တဲ့လူတွေဗျ …
မနိုင်ဘူး ..လုံးဝမနိုင်ဘူး …
ဟုတ်ပ မမမိုချိုရယ် အဲလိုအလစ်ချောင်းပြီးရိုက်တဲ့သူတွေ
ပုံ ၅ နဲ့ ၆က ဆိုဒ်ကြီးရင် တော်တော်လှမှာနော်..
မမိုချိုရဲ့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ရိုက်ချက်လေးတွေက မိုက်တယ်တော်…
ရိုက်လဲရိုက်နိုင်တဲ့သူတွေ..မိ ဂီ တို့ အမျိုးတွေလားတိဘူးးး….ဟိဟိ
ကျုပ်တောင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငှက်ပစ်လာသေးတယ်…
large ကို ဘယ် လို မှ ရွေး မရဘူး ၊ large ကို ရွေး ရတဲ့ အဝိုင်း လေး ထဲမှာ အရောင် မှိန်နေတယ်။ ပြီးခဲ့ တဲ့ တခါ သစ်ခွ ပန်းတွေ တင် ကတည်း က ပဲ၊ အမ စက်ကပဲ ဖြစ်သလား၊ ဘာ ကြောင့် လဲ မသိ ။ ရောက် လေရာ ကန် မလာ တကိုင်ကိုင်နဲ့ နောက်ကျန် နေ ခဲ့ လို့ … အဆူ ခံပြီး နဲ့ ရိုက် ထားတဲ့ လှတ ပတ လေးတွေ တင် မလို့ ဟာ… ကြည့် ကာင်းတဲ့ ဆိုဒ့်က ရွေးမရ…ပြောပြ ကြပါအုံး။
အယ် ဘာကြာင့် ဒီအတိုင်း ဖွင့် မရ ပဲ ဖြစ် သွားရတာတုန်း ၊
အိမ်နားက ပန်းခြံထဲ လမ်းသွားလျှောက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တာ…
ဘေးမှာ စကားပြောပေးရမဲ့လူ ပါသေးလား…
အစ်မ မိုချိုရေ… ခေါင်းစဉ်ကြည့်တာနဲ့… ကင်မလာမန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ပို့စ် ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ပို့စ်လို့တော့ ထင်မိသား … ဘာလို့လဲဆိုတော့ …ကျွန်မတို့ လူမျိုး အများစုက ..စိတ်နှလုံး နူးညံ့ကြတယ်လေ … ငှက်လေးတကောင်ကို … ဝိုင်းရိုက်ဖို့ဆိုတာ … တော်ရုံလူတွေ စိတ်မခိုင်ကြပါဘူး … ။
အစ်မရေ .. ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ၊ လှပတဲ့ ဓါတ်ပုံ ၊ အနုပညာမျက်စိနဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံက ရိုက်တာ လက်ခံလို့ ရပေမယ့် … သူများ အသက်ကို စတေးပြီး ပုံကောင်းထွက်အောင် ရိုက်တာကတော့ … တချက်တချက် လူစိတ်ပျောက်တယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ် … ။ တိရိစာ္ဆန်လည်း တိရိစာ္ဆန်အလျှောက် အသက်ရှိတာပါပဲ ….. ။ သတ်စားဖို့မဟုတ်ပါပဲ …အလှမွေးထားတဲ့ ကန်ထဲကငါးတွေ .. အဖြစ်ဆိုးရှာတယ် …
ခပ်လန့်လန့်စိတ်နဲ့ ကမန်းကတန်း ဖွင့်ဖတ်မိတယ် …
တော်ပါသေးတယ် … အမြင်နဲ့ အထင် တထပ်တည်းကျပေလို့….။
အခုတစ်လော ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ် မီးနဲ့ရှို့တဲ့သူနဲ့ ၊ ယုဇနဟော်တယ်မှာ ကိုယ့်မိန်းမကိုယ် မသေမချင်း ဒါးနဲ့ စိမ်ပြေနပြေခုတ်တဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ ဂယ်ထင်သွားဒါ…
ဂယ်လဲဟုတ်ဘူး …. လူဂျိုး… အဲလေ မမဆိုး…
ဟယ်တော် မညှာမတာ.. အဲလောက်တောင် ရိုက်ရလား… ငှက်ကလေး သနားပါတယ်… သူတို့ ကင်မလာကြီးတွေ ကနည်းတာကြီးဟုတ်ဘူး…။
ဟ ရိုက်လိုက်ကြတာ စိန်ပြေနပြေပါလား တနားပါဒယ်ဟယ် မမိုချိုကလည်းပြန်ရိုက်တယ် အနော်ကလည်း မမိုချိုပြန်ကိုချောင်းရိုက်တာ တူတိလိုက်ဘူး ဟိဟိ
ငှက်ကလေး ကိုမို ့…
မိုချိုကလေး ကို သာ အဲ့လူတွေ ဝိုင်းရိုက်ကြရင်
မောင်ပေ ဆိတ်ပူနေရမှာကွဲ ့။
အော် ဦးပေက ဆိတ်ကလေးတွေမွေးထားပြီး သွားသွားစမ်းတယ်ထင်တယ် ဆိတ်ပူဒယ်ဒဲ့
ဪ ငှက်လေး…. ဝိုင်းရိုက်ကြ
ဘယ်ညငှက်လေးကိုများ အမူးသမားတွေ ဝိုင်းရိုက်ကြလဲလို့
ငှက်ကြည်တဲ့ အလုပ်က တော်တော်လေးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်လဲ အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်
တော်တန်ယုံ ဝါသနာနဲ့လဲ မရပါ သူများနိူင်ငံတွေမှာတော့ ပရိုဖက်ရှင်နယ် အဆင့်ထိသွားကြတာပါ ကျနော်တို့ဆီတော့ အားနည်းနေပါသေးတယ်။
ငှက်ကလေး ကို ဝိုင်း ရိုက်နေ တဲ့ သူတွေ ကို ပြန် ရိုက် ပေးလိုက်တဲ့ မိုချို့ ရဲ့ အာဂ သတ္တိ ကို ချီးကျူး ပါတယ်။
ဒါမျိုး တွေ များများ လေး မျှပေးပါ လို့ တောင်းဆိုပါတယ်။။ :-)
အပေါ်မှာ မအိ စိုးရိမ် သလို ဘဲ တော်ကြာ လမ်းလျှောက်တာတောင်
ဘေးလူ နဲ့ ကြည်ကြည် နူးနူး လေး တွဲ မလျှောက် ဘဲ
ဘေးဘီ ဝဲယာ ကို သိမ်းငှက် တို့ရဲ့ စူးရှ သော မျက်လုံး နဲ့
သတင်း ရအောင် ကြည့် နေမိ လို့ ကင်မလာ လေး လဲ အဗျင်း ခံ နေရဦးမယ်။
အဲဒါ လဲ ပေါက်ကွဲ လို့ ပေါက်ခွဲ သူ ရဲ့ အပြစ် မဟုတ်ဘူး နော။ ;-)
နောက်ဆုံးရိုက်စရာမရှိလို့ ကြံရာမရ တာနဲ့ဖယောင်းတိုင်ကိုမီးရှို့ပြီးရိုက်ထားပါသည်။
nga myo says:
ဝိုင်းရိုက်ကြတာဆိုတော့ ဘာများလဲလို့အောက်မေ့တယ် ဒီကတလွဲထင်နေတာဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးး